Izingxenye zezimoto zesitimela nezesekeli Abakhiqizi nabahlinzeki - China Izingxenye Zezithuthi Zesitimela Nezesekeli Factory
Umugqa wokukhiqiza umshini we-KN95 semi-othomathikhi
IStraddle monorail bogie, ibandakanya intuthuko, ukuqalisa nokukhiqiza. Kusetshenziswe esitimeleni esincane, imoto yaphansi, isitimela esinejubane, isitimela senhlamvu kanye nethilamu, umthamo -100pcs / ngonyaka, okhethekile kumakhasimende. Sinikeze iChina Railway Group Limited, iChina Sky Railway Group.
Izinsiza: ithebula elikhulu lokushisela i-welding, ukunemba okuphezulu kwe-5-emaceleni emaceleni we-gantry; ngefektri enakho konke, ochwepheshe abangochwepheshe neqembu elikhulu labasebenzi abanamakhono.
Kusetshenziswe esitimeleni esincane, imoto ephansi, isitimela esinejubane elikhulu, isitimela sezinhlamvu nethilamu, amandla we-motor stator-2200pcs / ngonyaka; esikhethekile kumakhasimende, sinikeze iBombardier (China ne-Europ), i-skoda (Czech), isitimela saseChina.
Kusetshenziswe esitimeleni esincane, imoto ephansi, isitimela esinejubane, isitimela senhlamvu kanye ne-tram, amandla we-motor rotor-3000pcs / ngonyaka, amandla ezinye izingxenye zezimoto ezidonsa izinkulungwane; esikhethekile kumakhasimende, sinikeze iBombardier (China ne-Europ), i-skoda (Czech), isitimela saseChina.
Kusetshenziswe esitimeleni esincane, imoto ephansi, umzila wejubane, isitimela sezinhlamvu nethilamu, umthamo -250pcs / ngonyaka. Okukhethekile kwamakhasimende, sinikeze i-China Railway Group Limited,;
Izinto zokukhiqiza ezithuthukisiwe: isikhungo semishini ye-eksisi enesigamu sesine, isikhungo semishini esivundlile, ithebula lokuhlola lokucindezela ngokunembile ngeThuluzi Lokuhlola Eliphelele (Ukuhlolwa kwe-Hook, ukuhlolwa komoya, ukuhlolwa kokukhathala, njll.)
Kusetshenziselwe ujantshi omncane, imoto ephansi, isitimela esinejubane, isitimela esinqunyelwe kanye ne-tram, umthamo -100pcs / unyaka, okhethekile kumakhasimende, sihlinzekele iChina Railway Group Limited, iChina sky Railway Group;
Izinsiza kusebenza: ithebula elikhulu le-welding rotary, ukucacisa okuphezulu kwe-5 - isikhungo semishini yokubhinca emaceleni. Sinefekthri ehlome kahle, ochwepheshe abaqeqeshiwe neqembu elikhulu labasebenzi abanamakhono.
Indlu yezimoto ehlile ngamanzi
Ifakwe esitimeleni esilula, imoto yaphansi, isitimela esinejubane elikhulu, isitimela sezinhlamvu nethilamu, indlu yezimoto epholile ngamanzi inikeza umphumela omkhulu wokupholisa ngesifunda sokupholisa amanzi. Umthamo wendlu epholile yamanzi opholile ingu-1500pcs / ngonyaka futhi umthamo wezinye izingxenye zemoto yokudonsa ungaphezu kwezingcezu eziyinkulungwane minyaka yonke. Ngokuqondene namakhasimende, sinikeze iBombardier (China ne-Europ), i-skoda (Czech), isitimela saseChina.
Amagama angukhiye A, Amagama angukhiye B, Yonke Imikhiqizo